Muxuu madaxweyne Xasan Sheekh ku xushay Xamza? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu madaxweyne Xasan Sheekh ku xushay Xamza?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor sii horeysay magacaabay Xamza Cabdi Barre inuu noqdo ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha uu ku xushay.
“Waxaa go’aankaan ku saleeyay marka eegay aqoonta, waaya-aragnimada iyo kartida aan ku aqaano Mudane Xamze ayaa u gartay in uu yahay qofka ku haboon ee ka bixi kara xilkaas iyo Soomaaliyada cusub ee waayahay cusub ku jirta,” ayuu yiri.
Ilo-wareedyada la hadlay Caasimada Online ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu Xamza ku doortay inuu yahay qof uu yaqaan, oo ay muddo wada-shaqeynayeen, taasi oo yareyn karta khilaaf ka dhex dhashay labadooda.
“Waxaa kula dardaarmaya Ra’iisul Wasaaraha in uu dardar-galiyo kuna mashquulo oo aad u howl-galiyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya, taasi oo hortabintooda ugu horeyso ay tahay; Amniga, Gurmadka Abaaraha, Heshiisiinta, Horumarinta Bulshada iyo Ka hortaga aafooyinka cimilada isbadelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed.”
“Ra’iisul Wasaaraha cusub waa in uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la-leedahay aduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya hal-hayskeenii ahaa Soomaali Heshiis ah, Dunidana Heshiis la ah.”